အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: March 2009
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၃၁ ရက် ၂၀၀၉ )
* ကမ္ဘာ့သြဇာကြီးသူ ၁၀၀ တွင် ဒေါ်စု ထိပ်ပိုင်းမှ ပါဝင် [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်တဦး ရာထူးတက်ပြီ [Click]
* ခိုးကူးခံရမည်စိုးသဖြင့် သင်္ကြန်သီချင်း အထွက်နည်း [Click]
* စစ်အစိုးရရဲ့လဘက်တားမြစ်ကြေညာချက်ရှင်းလင်းခြင်းမရှိ [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ )
* စစ်အစိုးရကိုထောက်ခံဖို့ ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ ပေါင်းစုံတွင်း (၁)ကိုကတိပေး [Click]
* အင်တာနက်မှနိုင်ငံရေးဝေဖန်စာသူရေးတာမဟုတ်ဟုစာရေးဆရာကျော်ဝင်းငြင်းဆို [Click]
* နိုင်‌ငံ‌ရေးအကျဉ်းသား‌ထောင်‌‌ပြောင်း [Click]
* အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပါကစ္စတန်တာဝန်ယူမှုအမေရိကန်မျှော်လင့် [Click]
* အမေရိကန်တွေဝင်ငွေနဲ့လောက်အောင်ခြိုးခြံဖို့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတိုက်တွန်း [Click]
* ဆန္ဒပြသူများကြောင့်ထိုင်းကက်ဘိနက်စည်းဝေးမည့်နေရာရှာနေရ [Click]
* Pro-League (၈) သင်းမှအားကစားသမားအချို့စာချုပ်ပါအားကစားကြေးအလျှော့ခံနေရ [Click]
* မြ၀တီလောင်းကစားသမားတဦးဒီကေဘီအေပစ်သတ်လို့သေ [Click]
* ပါကစ္စတန်‌ရဲသင်‌တန်း‌ကျောင်းစီးနင်းခံခဲ့ရ [Click]
* နယ်စပ်သံဆူးကြိုးကာမှုမြန်မာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကဖြေရှင်းချက်တောင်း [Click]
* ပါကစ္စတန်ရဲသင်တန်းကျောင်း ၈ နာရီကြာစီးနင်းခံရမှုအဆုံးသတ် [Click]
* FM ရေဒီယိုလိုင်းသစ်ကို ရခိုင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးဝေဖန် [Click]
* မြန်နှုန်းနှေးသဖြင့်ရန်ကုန်အင်တာနက်ဆိုင်အချို့ပိတ်ထား [Click]
* မန္တလေးနန်းတွင်းမီးလောင် [Click]
* ပြည်သူ့ရင်ပြင်နှင့်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂလိကသို့ပြောင်း [Click]
* ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများလျော်ကြေးရရန်ထိုင်းအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပြောဆို [Click]
* သံလက်သီးကြောင့်မျက်လုံးကွယ်သည့်နိင်ငံရေးသမားကိုထောင်ပြောင်း [Click]
* အင်တာနက်သူလျှိုလုပ်မှု တရုတ်နိုင်ငံ စွပ်စွဲခံရ [Click]
* Political prisoners transferred despite worsening health [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:37 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၀၉ )
* G20 မှာတခုခု မရရင်‌ စီးပွားပျက်‌ကပ်‌ကြုံရနိုင်‌လို့Soros‌ ပြော [Click]
* G-20 ညီလာခံ မစခင် ဆန္ဒပြပွဲများ စတင် [Click]
* မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နှုတ်ထွက်မည် [Click]
* အမေရိကန်ပြန် သီးလေးသီး [Click]
* လူမျိုးနဲ့ ဘာသာတရားအတွက်လို့ ပြောနေတဲ့ DKBA များ ကြည့်ရန် [Click]
* အီရတ်‌နိုင်‌ငံမြို့ တော်‌ဘဂ္ဂဒက်‌မှာလုံခြုံရေးတင်းကြပ်‌ [Click]
* အင်ဒိုနီးရှားရေကာတာကျိုးပေါက်မှုသေဆုံးသူ ၉၆ ဦးရှိပြီ [Click]
* ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အချိုးဖောက်ဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထုတ်ပြန် [Click]
* ဒေါ်ဝင်းမြမြပူတာအိုထောင်ကိုပြောင်းခံရ [Click]
* မလေးရှားရောက်တရားဝင်မြန်မာအလုပ်သမားများအခြေအနေ [Click]
* ကဗျာဆရာကြည်အောင်အမှတ်တရ [Click]
* ဟိုင်းကြီးကျွန်းလေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေ [Click]
* ရဲစခန်းဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းတွေဖယ်ခိုင်းနေ [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:43 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၈ ရက် ၂၀၀၉ )
* အိုဘားမားရဲ့ အာဖဂန်‌ ဗျူဟာသစ်‌ [Click]
* မြန်မာပြည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကုလရှုတ်ချ [Click]
* လူႛအခွင့်အရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာတုန့် ပြန် [Click]
* ကဗျာဆရာကြည်အောင်ကွယ်လွန် [Click]
* လူ့အခွင့်အ‌ရေးစုံစမ်းဖို့ မစ္စတာကင်‌တာနားကိုသက်‌တမ်း‌ထပ်‌တိုး [Click]
The goal of the KNU and the Karen people’s struggle is for establishment of the federal union of Burma based on democracy, equality, internal self-determination for all the ethnic nationalities, justice, peace and social progress.
In the effort to resolve the problems by peaceful means, the KNU leaders met with regimes in power, for peace talk, on four separate occasions.
1. The first negotiation, reportedly brokered by the diplomatic missions of India and Pakistan, took place in Rangoon. Afteratruce was declared, the Karen delegation led by Saw Ba U Gyi, President of the KNU, departed to Rangoon for peace talk with the Burmese government. In the talk, the government demanded surrender of arms from the Karen, with the threat of detention of delegation leader, Saw Ba U Gyi. There was no agenda on the government side to discuss the grievances and rights of the Karen people. While the Karen leaders were in Rangoon, the government troops violated the truce by sending in reinforcement to the front line against the Karen. To escape from the trap, Saw Ba U Gyi pretended to agree to the idea of laying down arms and insisted on going back and persuading the Karen forces. He had to leaveaKaren leader, asahostage. No Karen leaders agreed to lay down arms and hostilities were resumed. After this frustrating and disappointing experience, Saw Ba U Gyi laid down the following 4-point guideline, which has come to be known as the Principles of Saw Ba U Gyi. Up to this day, the KNU and the Karen resistance have firmly embraced the Principles and they will go on embracing them indefinitely.
(1) For us, the Karen people, surrender is out of the question;
(2) We shall retain our arms;
(3) Recognition of Karen State must be complete;
(4) We shall decide our own destiny.
2. The second talk took place in 1959, in the form ofasecret meeting, during the care-taker government led by Gen. Ne Win. At this time also, the regime’s representatives demanded the Karen to lay down arms first, and talk about the Karen grievances later. The Karen refused and hostilities continued.
3. The third talk took place in 1996. There were four rounds of talk during the year. On the regime side, the talks were led by officers of the Burmese military intelligence department, the head of which was Gen. Khin Nyunt, Secretary (1) of the SPDC.
4. The fourth talk started in late 2003 and went on until May 2005. Here again, on the regime side, the talks were conducted by officers under Gen. Khin Nyunt, who had now become the prime minister. There were7rounds of talks. In January 2004,averbal cease-fire agreement was accepted, known as “Gentlemen Agreement”, afterameeting between the KNU vice-president Gen. Bo Mya and Gen Khin Nyunt.
However, the SPDC continued to keep contact with former 7th Brigade commander, Htin Maung secretly, showing that the SPDC was neither sincere nor serious about peace talk. It was using peace talk simply asastrategy just for dividing the KNU.
The present SPDC military dictatorship is alsoakind of fascist/Nazi like dictatorship. It is an extension of Ne Win’s dictatorship. Its ideology is based on extreme racism, militarism and feudalism. Its policy against all opposition is based on pathological hatred and total elimination of dissent. The SPDC’s goal is to build the Fourth Burman Empire out of the multi-ethnic state of Burma. The master-race ideology of the SPDC leaders makes them to have no agenda foracompromise solution. The so-called constructive engagement policy makes it only to become more arrogant and conceited.
The SPDC military regime is planning to holdageneral election in 2010, after adopting its Constitution by fraudulent means inareferendum held in May 2008. The Constitution was drafted by the so-called “National Convention” which was stacked with its hand picked delegates. The Constitution gives the military men 25% of the seats in all elected bodies of the government, at all levels. The important positions such as the presidency, defense, etc. are also to be occupied by military men or former military men. Moreover, the Constitution is foraunitary State, though the country is given the name “Union.”
Chief of the armed forces is empowered to declare the state of emergency or, in other words, to seize state power at his whim. Amendment of the Constitution requires more than 75% vote of the legislature. In short, the Constitution ensures the military establishment to have controlling power in the executive as well as in the legislative branch of the government and remain to be an elite class of the society.
Burma is being regarded as an international problem andathreat to international peace byanumber of political analysts because of drug, human rights, refugees, human trafficking and illegal immigrant workers problems. Fascist/Nazi like ideology is infectious and there isalikelihood of other countries in the region being infected by it.
Posted by Andaman Hero at 7:57 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၀၉ )
* မင်းကိုနိုင်‌နဲ့ လှမျိုးနောင်ကျန်းမာရေးဆိုရွားနေ [Click]
* မြောက်ဥက္ကလာမှာဗုံးကွဲတဦးသေ [Click]
* ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကိုဒုတိယနေ့ဆက်ဝိုင်းဝန်ကြီးအဖွဲ့ရုံးမတက်နိုင်အောင်ဆန္ဒပြမည် [Click]
* တပ်မတော်နဲ့ပြည်သူနီးစပ်ရေးမလွယ်ကူ [Click]
* အဓမ္မခိုင်းစေမှုများအိုင်အယ်လ်အိုကိုတိုင်ကြားမှုနည်းပါး [Click]
* တရုတ်နို့မှုန့် တရားခံများ အယူခံ ပယ်ခံရ [Click]
* ဒီဗွီဘီရေဒီယိုအသံလွှင့်လှိုင်းပြောင်းမည် [Click]
* ရန်ကုန်- နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီး ဖွင့်လှစ် [Click]
* Monks protest against banning of ceremony [Click]
Posted by Andaman Hero at 2:15 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၆ ရက် ၂၀၀၉ )
* အမေရိကန်အရာရှိ မြန်မာခရီးစဉ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အတည်ပြု [Click]
* အမေရိကန်အရာရှိနှင့်စစ်အစိုးရတွေ့ ဆုံခြင်းသည်အမေရိကန်ပေါ်လစီပြောင်းခြင်းမဟုတ် [Click]
* ရန်ကုန်ရောက်နေသည့်အမေရိကန်အရာရှိစီအာပီပီနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး [Click]
* မက္က‌ဆီကိုမူးယစ်‌တိုက်‌ဖျက်‌‌ရေးအ‌မေရိကန်‌လည်းတာဝန်‌မျှယူ [Click]
* မဆလဝန်ကြီးဟောင်းအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရသိန်းရာနှင့်ချီတန်သည့်စိန်ထည်တွေပါသွား [Click]
* ဒေါ်လာကိုအာခံဖို့တရုတ်ကြိုးပမ်းချက်မအောင်မြင် [Click]
* သောင်းချီသည့်တပ်ဆင်ထောက်ခံသူများထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကိုဝိုင်းပြီ် [Click]
* ဝန်-ဝန်ကြီး-ဝန်ထောက် ဟူသောဝေါဟာရသို့ [Click]
* အမေရိကန် အရာရှိနှင့် တွေ့ဆုံမှုမှ အပြောင်းအလဲ မဖြစ်နိုင်ဟု အန်အယ်ဒီ ပြောကြား [Click]
* အမေရိကန်ရောက်မြန်မာကလေးငယ်များခဲဆိပ်သင့်မှုတိုင်းရင်းဆေးနှစ်မျိုးကိုသံသယရှိ [Click]
* နိုင်ငံရေးပြဿနာများရှုပ်ထွေးနိုင်ကြောင်းရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ပြောကြား [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားဖမ်းထားခြင်းကိုတ႟ရုတ်ရုပ်မြင်သံကြားထူးခြားစွာဝေဖန် [Click]
* ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)ကဧရာဝတီဦးအောင်ဇော်ကိုတရားစွဲဟုဆို [Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရာထူးကျသွားပြီ [Click]
* တပ်မတော်အရင်းရှင်စနစ် မြန်မာပြည်တွင် ကြီးထွားနေ [Click]
* ဗြိတိသျှခရီးသွားကိုသတ်တာ၊မြန်မာတွေလို့ ထိုင်းပြော [Click]
* ဘိုကလေးဆေးရုံမှာသားဖွားမီးယပ်၊ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မရှိ [Click]
*ေ႟ရွှတြိဂံဒေသမှာဘိန်းအထွက်တိုးမည့်အလားအလာ [Click]
ှ* ဒီမိုကရေစီတိုးတက်မှုမြင်ရလျှင်ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမှုကို EU လျှော့ပေါ့မည် [Click]
ှ* ရှေ့ နေကိုဖိုးဖြူသရက်ထောင်မှာတိုက်ပိတ်ခံနေရ [Click]
* မစုစုနွေး ကျန်းမာရေး AHRC စိုးရိမ် [Click]
* လပွတ္တာ စီးပွားရေး နာလန်ပြန်မထနိုင်သေး [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရေး ထိုင်းထောက်ခံဟု အဖိဆစ် ပြော [Click]
* City FM လိုင်း ၄ လိုင်း မကြာမီ တိုးချဲ့ ထုတ်လွှင့်မည် [Click]
* ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံးအာဏာရှင်တွေအထဲမှာမြန်မာထိပ်‌ကပါ [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုအမေရိကန်အရာရှိသီးခြားစီတွေ့ဆုံ [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေးကုလကြေညာချက်အမေရိကန်ထောက်ခံ [Click]
* ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအုန်းသန်း ဖမ်းဆီးမှု ဥပဒေနဲ့မညီ၊ ကုလအဖွဲ့ ထုတ်ပြန် [Click]
* ဖိအားပေးသည်ကို အလျှော့ပေးမည် မဟုတ်ဟု KNU ပြော [Click]
* ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်း [Click] ဆောင်းပါး
* ဆရာကြီး Toမောင်ညိုနှင့်ဆရာကြီးယောဟန်အောင် ၂၀၁၀-ထိုးပွဲ [Click]
* မြန်မာဆန်ကိုမြ၀တီ၊မဲဆောက်နယ်စပ်ဂိတ်မှထိုင်းဖက်ကိုတရားဝင်တင်ခွင့်ပြုပြီ [Click]
* တပ်မတော်ခန်းမအရောင်းပြပွဲစစ်အစိုးရသတင်းစာတွေမဖော်ပြ [Click]
* ဒေါ်စုလွှတ်ပေးလျှင်ဒဏ်ခတ်မှုရုပ်သိမ်းရန်အီးယူစဉ်းစားမည် [Click]
* သင်္ကြန်နားနီးလောင်စာဆီဈေးပြန်တက် [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နိုင်ငံရေးဖွင့်ဆိုချက်များ [Click]
* ခြစားမှုကို ဖော်ထုတ်သူ ဧည့်စာရင်းဖြင့် ထောင် ၇ ရက် ကျခံရ [Click]
* European Union considers easing of sanctions [Click]
* Senior US official visits Burma amid signs of softening in policy [Click]
* Burmese nationals arrested for smuggling rocket launchers into India [Click]
* UN ruling will increase pressure on the Burmese government [Click]
* Police ignore traffickers in crackdown on Shan drug use [Click]
Posted by Andaman Hero at 11:33 AM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၀၉ )
* ကေအန်ယူလက်နက်ချရေးထိုင်းကိုစစ်အစိုးရဖိအားပေး [Click]
* မြန်မာ လက်နက်မှောင်ခို ၃ ဦးကို အိန္ဒိယ နယ်စပ်တွင် ဖမ်းမိ [Click]
* ကေအန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်ဆွေးနွေးမည် [Click]
* ပါတီ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံခွင့်ရရေး အန်အယ်ဒီက စစ်အစိုးရကို တောင်းဆို [Click]
* မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမှ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ [Click]
* နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ် [Click]
* ဗိုလ်သိန်းစိန် ဘိန်းဖြူမှောင်ခိုမှု့ မှာ ပါဝင်ပက်သက်နေလား? [Click]
* ဆရာမောင်စူးစမ်းရဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဆွေးနွေးပွဲ [Click]
* ‌ဒေါ်စုကိုဖမ်းထားတာဥပ‌ဒေနဲ့ မညီလို့ ကုလ‌ပြော [Click]
* စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း လူသန်းပေါင်းများစွာ ထိခိုက်နိုင်၊ IMF သတိပေး [Click]
* မြန်မာ ဘယဆေးနှစ်မျိုး ခဲဆိပ်ပါ၊ ဖို့ဒ်ဝိန်းကျန်းမာရေးဌာန သတိပေး [Click]
* မြန်မာစစ်အစိုးရကို၊ကုလဝေဖန် [Click]
* ဒလိုင်းလားမားကို ဗီဇာ‌မ‌ပေးတဲ့ အတွက် ညီလာခံရက်‌ ‌ရွှေ့ ဆိုင်း [Click]
* စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအိုဘားမားတိုက်တွန်း [Click]
* ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ရန်ကုန်အင်တာနက်ဆိုင်အများစုပိတ်ထားရ [Click]
* ကာတာမှမြန်မာလူငယ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအမျိုးဟုသံသယဖြစ်ခံရ [Click]
* CNG 82 Model နှင့်အောက်ကားများလုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖျက်သိမ်းမည် [Click]
* ၅ နှစ်ခန့်အတွင်း ကလေးစစ်သား ၂ဝ လွတ်မြောက်ဟု လှုပ်ရှားတက်ကြွသူက ပြောဆို [Click]
* လာဘ်ထိုးမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ရ [Click]
* မစုစုနွေးကိုထောင်ပြောင်းပေးဖို့ အာရှလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ကတောင်းဆို [Click]
* ရှမ်းရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများဘ၀ထိုင်းရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့် [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျယ်ချုပ်ကုလသုံးသပ်ချက်ကိုဥပဒေပညာရှင်များကြိုဆို [Click]
* သတ္တိကို မွေးဖွားလာစေခြင်း [Click]
* ကရင်သူပုန်များကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ထိုင်းကဖျောင်းဖျမည် [Click]
* KNU Willing to Talk, but not on Burmese Territory [Click]
* KNU in Serious Crisis [Click]
* Singapore's Economy: Perils of Globalization [Click]
* Malaysia Ruling Party to Choose Leaders [Click]
သူနာမည် ကတော့ ခရစ်ဆီ ၀ဏ္ဏ (Chrissie Wunna) ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ဒီဇင်ဘာ လ၁၉ ရက် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံယောက် ရှိုင်းယားက ဒွန်ကတ်စတာ မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မိဘ နှစ်ပါးလုံးက မြန်မာလူ မျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ကတော့ အခုထိ အနုပညာလုပ် ငန်းတွေတစိုက် မတ်မတ် လုပ်နေ တဲ့ ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးဝဏ္ဏ ပါတယ်။ ခရစ်ဆီ ရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ကတော့ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ နာမည်ကျော်တေးရေး ဆရာမောင်သစ်မင်းဖြစ်ပြီး သူ့ဖခင်ရဲ့ညီအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ( ရွှေဘို မင်းသားကြီးရဲ့အဆက်အနွယ် တွေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
မော်ဒယ် တစ်ယောက် အဖြစ် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပြုနေပြီး အမျိုးသား မဂ္ဂဇင်းတွေ ရဲ့ အဖော်အကျွတ် တွေရိုက်တဲ့ Sexy မော်ဒယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက Blogger တစ်ယောက်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ Sexy ပုံလေးတွေကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (www.dailystar.co.uk/user_blogs/post/2637/2008/03/03/560)
အင်္ဂလန် နိုင်ငံက ITV2ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာ ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့ ကတည်းက စပြီး တင်ဆက်ပြသနေ ရာမှာ လူကြိုက်များတဲ့ “Paris Hiltons British Best Friend” အစီအစဉ်မှာ နာမည်ကျော် ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် ပါရီဟီလ် တန် နဲ့ အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်ကတဆင့် Forward လုပ်လာတဲ့ Gossip လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေလိုက်တာ။
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ )
ဧဇံ 1:05 - 14.3.09
* မြန်မာစစ်အစိုးရလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်များနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ရေးထိုင်းကိုအကူအညီတောင်း [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၉ ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် [Click]
* NLD အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်များကိုကော့မှုးအာဏာပိုင်များကမြို့ အထဲအ၀င်မခံ [Click]
* မြန်မာစစ်တပ်မှထွက်ပြေးလာသူတပ်သားသုံးဦးကိုဘင်္ဂလားအာဏာပိုင်များကဖမ်းမိ [Click]
* သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နှစ်ပတ်လည် ကျင်းပ [Click]
* အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့ဘဏ်အကြွေးဆိုးများဖယ်ရှားရေးအစီအစဉ် [Click]
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု(FDB)ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊မတ်လ ( ၁၈ ) ရက်နေ့ မှ မတ်လ ( ၂၂ ) ရက်နေ့ အထိထိုင်း၊မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
FDB ညီလာခံကမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်(၄) ရပ်နှင့်ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်(၉) ရပ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊စစ်အာဏာရှင် ဖျက်သိမ်းရေး၊ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့ အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး
၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုမှုတစုံတရာမရှိသေးသရွေ့ နအဖကပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်
သတင်း - အင်ဒမန်ဟီးရိုး
* မြန်မာခရီးစဉ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကရိုဟင်ဂျာကိစ္စပြောဆို [Click]
* တေဇရဲ့သားတွေဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲ [Click]
* သတင်းရရန် ဂျာနယ်ဖတ်နေကြရသည်ဟု စစ်တမ်းတခုက ဖော်ပြ [Click]
* ကနေဒါရှိကျုံယွမ်ဦးကျော်မြင့်ရဲ့ယူဒီပီပါတီနှင့်မပတ်သက်ဟုဦးသုဝေငြင်းဆို [Click]
* စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနမှကြံ့ဖွံ့အမတ်လောင်း (၃) ဦးလျာထား [Click]
* ၀င်းသူဇာဆိုင်တွေကိုရတနာမန်းကုမ္ပဏီက အေးဂျင့်ယူ [Click]
* ပြည်ထောင်စုနဲ့ဘုံရန်သူ [Click]
* ခေတ်ပြိုင်ပုံနှိပ်သတင်းဂျာနယ်ခေတ္တရပ်နားမည် [Click]
* မြင်းခြံမြို့ ကလေးငယ်အချို့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ် [Click]
* ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လေဖြတ် [Click]
* ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းတဦးလပွတ္တာ၌ရုတ်တရက်သေဆုံး [Click]
* ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင် [Click]
* ခွန်ဆာ့အမျိုး မူးယစ်ဆေးဝါး ဂိုဏ်းဝင်များ အဖမ်းခံရ [Click]
* စစ်တပ် သိမ်းပိုက်လယ်ယာတွင် ပိုင်ရှင်များ ပြန်လုပ်ခွင့်ရ [Click]
* ကမ္ဘာ့ဈေးအ‌သက်‌သာဆုံးကားအိန္ဒိယမှာထုတ်‌လုပ်‌ [Click]
* ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် လွတ်‌လပ်‌‌ရေးစစ်‌ပွဲကာလ စစ်‌ရာဇဝတ်‌မှု‌တွေ [Click]
* စီးပွားရေး မူတွေနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အသုံးစရိတ် သမ္မတ အိုဘားမား ခုံခံ ကာကွယ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:49 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်း နိုင်‌ငံခြားရေး ဝန်‌ကြီး မြန်မာခရီးစဉ်‌ [Click]
* ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည်ခရီး စတင် [Click]
* ‌ဒေါ်ကြည်ဦး ဈာပနသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းခြင်းပို့ [Click]
* ‌မကွေး - လောင်းကစားကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပညာရေးထိခိုက် [Click]
* ‌တနင်္ဂနွေသတင်းအစီစဉ်-အဖိနှိပ်ခံလယ်သမားများအောင်မြင်မှုမှသည် [Click]
* ‌ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဆတိုးဟုမြန်မာစစ်အစိုးရထုတ်ပြန် [Click]
* ‌ဂဠုန်ဦးစော မိသားစုဝင်တွေကန်ႛကွက်တဲ့ အမှု [Click]
* အာဖဂန်‌မူးယစ်‌ တားဆီး‌ရေး အ‌မေရိကန်‌ မ‌အောင်‌မြင်‌ [Click]
* ရိုဟင်ဂျာအရေးဆွေးနွေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိ [Click]
* ရာထူးက ဖယ်ခံရတဲ့ ပါကစ္စတန် တရားသူကြီးချုပ် တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင် [Click]
* ဆီလီကွန်ရပ်ကွက်မှာ တောက်ပြောင်နိုင်အုံးမှာလား [Click]
* Border fence is notasolution to Save the Rohingyas!
With the fencing of the border of Area of Burma with Bangladesh, the Arakan State will becomeaterrible concentration camp for the Rohingyas.The Rohingyas will die more in this big Jail as there will not able to go out easily even after bribed to Na Sa Ka Moreover the Na SA Ka, the boarder Security Force of SPDC will get more access to make fund through various check posts. The SPDC soldiers will organise more foced labourers on the back of Rohingyas and Rakhaines in confronting with the insurgents of Rohingyas and Rakhiens. The Military Comanders will accumulae more fund from the resouces of Arakan state that are smuggling to Bangladesh. The humnan right activists from all over the world those willing to visit Arakan will be denied their easy entry. The relations between Burma and Bangladesh will further detoriate on the issues of unsloved maritime and land boundries and Bangladesh will not meterialise the already agreed an establishing Arakan Raod from the Cox's Bazar District of Bangladesh to Maungdaw Township of Arakan state.
But the Arakan State will be more focus in the eyes of International Community. In this case the already Stationed UN agencies like UNHCR and UNDP shall be more active to safeguard the oppressed Rohingyas of Arakan.
Posted by Andaman Hero at 1:23 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဇာဂနာ့ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး ကွယ်လွန် [Click]
* စာရေးဆရာမကြီး(ဒေါ်) ကြည်ဦး(၁၉၂၅ - ၂၀၀၉) ကွယ်လွန် [Click]
* ပုသိမ်ထောင်ဖောက် အကျဉ်းသား ၃ ဦး လွှတ်မြောက်သွား [Click]
* မြန်မာမင်းများ လက်ထက်တော်ကတောင်တော် ရွှေပုပ္ပား [Click]
* ထိုင်းမြန်မာပြဿအပေါ်ထိုင်းဖက်ကအမေရိကန်စာနာ [Click]
* နိုင်‌ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးပေမဲ့၊စီးပွားရေးအလားအလာမ‌ကောင်း [Click]
* မစုစုနွေး ကလေးထောင်တွင် ကျန်းမာရေးဆိုးဝါးနေ [Click]
* ခွန်ဆာ၏တပည့် ၃ ဦး ထိုင်းတွင် အဖမ်းခံရ [Click]
* နယ်စပ်မှာ သံဆူးကြိုး ဘာကြောင့်ကာ [Click]
* ရေရှည်အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်တောင်းသူ အမေရိကန်မှာ စံချိန်တင် [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ယောက္ခမကွယ်လွန် [Click]
* နာဂစ်သောင်တင် ဂျပန်သင်္ဘောကြယ်ငါးပွင့် အလကားရ [Click]
* ရန်ကုန်ဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်များအား၊ဖျက်ခိုင်းငှားရမ်း၊၀ယ်ယူထားသူများ၊နစ်နာ [Click]
* အပါယ်ရတနာ၊စစ်အစိုးရသတင်းစာဂုဏ၀ိသိဋ္ဌဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲကြော်ငြာထည့်ခွင့်ပိတ် [Click]
* တွံတေးတွင် အိုးအိမ်ဆောက်ပေးရေး ဆန္ဒပြ [Click]
* Myanmar's foreign trade up [Click]
* Giving individual rights way to wind down ethnic struggles [Click]
* Regional commander orders locals to pay for nursery school building [Click]
20 March 2009 (Geneva, Switzerland) - Pope Benedict XVI ‘s comments on the role that condoms play in preventing the further spread of HIV are irresponsible and dangerous, says Julio Montaner, President of the International AIDS Society (IAS).
On March 17, 2009, while traveling to Cameroon, the Pope addressed the media, calling AIDS “a tragedy that cannot be overcome by money alone, that cannot be overcome through the distribution of condoms, which can even increase the problem”. This is the first time that Pope Benedict has directly spoken out against the use of condoms. While the historic stance of the Roman Catholic Church against contraception use is widely known, Benedict’s predecessor John Paul II never spoke out publicly against the use of condoms to prevent HIV infection.
“There is notashred of evidence to suggest that condoms can increase HIV transmission – absolutely the contrary,” said Dr. Montaner. “Male and female condoms, used correctly and consistently, can reduce the risk of sexual transmission of HIV by 80-90 percent.”
IAS Executive Director Craig McClure further condemned the Pope’s remarks. “This is the first trip to Africa by Pope Benedict,acontinent that has been ravaged by AIDS. As of 2006, according to the Vatican, over 17% of the total African population practices Catholicism. The numbers are growing each year. Catholics throughout Africa rely on the spiritual guidance of the Pope. To suggest that condom use contributes to the HIV problem is not merely contrary to scientific evidence and global consensus, it contributes to fueling HIV infection and its consequences - sickness and death. Such outrageous comments are not appropriate coming from the highest office in the hierarchy of the Catholic Church.”
Dr. Montaner added, “While condoms are not the only solution to combating HIV, they areacritical, cheap and cost-effective element ofacomprehensive approach to HIV prevention. Instead of spreading ignorance, the Pope should use his global position of leadership to encourage young people, who are our future, to protect themselves and others from HIV infection using all the tools we have at our disposal, including condoms. His remarks are insulting to the tireless efforts of committed scientific, public health and human rights leaders around the world to protect the poorest of the poor from HIV infection.”
The IAS is the world’s leading association of HIV professionals, with more than 13,000 members from 188 countries working at all levels of the global response to HIV/AIDS. IAS members represent scientists, clinicians, public health and community practitioners on the frontlines of the epidemic. The IAS is the lead organizer of the biennial International AIDS Conference and the IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, which will be held in Cape Town, South Africa in July 2009.
သူတို့ အတွေးနဲ့ သူတို့ ရဲ့အရေးအသား
Posted by Andaman Hero at 2:52 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ )
ကြေးစည်သံကြားရင် ခွေးလို အူ ပြီး -မျောက်လို ကနေ တဲ့ ကျော်ဆန်း
စားသောက်ဆိုင်တခုမှာ မူးပြီး ကာရာအိုကေ ဆိုလိုက်ကလိုက်လုပ်နေတဲ့ကျော်ဆန်းပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မြှောက်ပေးရင် ဟိုဒင်း တက်အောင် ကတယ်ဆိုတာ ကျော်ဆန်းလို လူမျိုးတွေကို ပြောတာပါ။
ဒီကောင် ဟာ ငယ်ငယ်က ခပ်ပေါပေါ ခပ်ရူးရူး လို့ သိရတယ်။ သူတို့ ရွာ က အိုးစည်ဝိုင်းမှာ လိုက်က ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကတာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အနောက်တိုင်းအက ကို မျောက်တကောင်လို ကနေပြီး သူများတွေကို မက နိင်အောင်ပိတ်ထားတာ မိုက်ရိုင်းတယ်လေ။
လွတ်လပ်ရေးလိုခြင်ရင် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်ဆိုးကြီးမှာ သင့် သား၊ မြေး၊ မြစ် ....များကို သင့်လိုဖြတ်သန်းစေခြင်ပါသလား။ သင့်မျိုးဆက်များ ဘာသာမဲ့စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ သင့်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ သင့်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာအမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ် ဖို့ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က တိုက်ပွဲဝင်ကြပါ။ သေနတ်ကိုင်တိုက်မှ တိုက်ပွဲဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ အားလုံးသိစေခြင်ပါတယ်။
* ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစစ်အစိုးရကိုဦးခင်ရွှေဝေဖန်ပြီ [Click]
* လူရွှင်တော်ဇာဂနာခဲဆိပ်သင့်ဝေဒနာ ခံစားနေရ [Click]
* ဒုက္ခသည်စခန်းများ ပိတ်ရန် ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ တောင်းဆို [Click]
* ဦးပဉ္ဖင်းကျော်ဟိန်း လူဝတ်လဲဟု ကောလာဟလ ထွက်ပေါ် [Click]
* အန်ဒီအေ-ကေ လက်နက်ချရန် အသင့်ရှိ [Click]
* စစ်တပ်ဝန်ထမ်းမဵားကို လစာတိုးပေးဖိုႛ စီစဉ်နေ [Click]
* ဖမ်းထားသည့် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများကို ထောင်နှစ်မစေ့မှီ ပြန်လွှတ် [Click]
* တညအတွင်း သစ်‌ကား အစီး ၃၀၀ ခိုးထုတ်‌ [Click]
* မြ၀တီ နယ်စပ်မှ နေရပ်သို့ပြန်လာကြသူ များတွင်အပြီးပြန်လာကြသည့်ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအများစုလည်း ပါဝင်နေ [Click]
* မလေးရှားကထိုင်းလိမ္မော်သီးသွင်းခွင့်ပိတ် [Click]
* ဒေါ်လာဈေး ရုတ်တရက် မြင့်တက်မြန်မာငွေ(၅)ရာခိုင်နှုန်းကျ [Click]
* အသက်၃၄နှစ်သမ္မတသစ် မဒါဂတ်စကာမှာတက် [Click]
* ဆုကြေးငွေများ ပြန်အပ်ရန် AIG အကြီးအကဲ တိုက်တွန်း [Click]
* မကွေးက အစိုးရသိမ်းလယ်တချို့  ILO ကြောင့်ပြန်ရ [Click]
* အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေရှိနေ [Click]
* နိဗာန်ယာဉ်ကိုရေးဝေးအပြင်၊ထိန်ပင်မှာပါထားဖို့ ထပ်မံစာပို့[Click]
* ညောင်လေးပင်မြို့ နယ်မှရယကများဒေသခံထံမှငွေလိမ်ယူ [Click]
* China's military delegation visits Myanmar [Click]
* Anatomy of an uprising [Click]
* Young couple gets first prize in kissing contest [Click]
* Britney Spears receives death threats [Click]
* Natasha Richardson dies at 45 after ski accident [Click]
* Austria: Prosecutor urges life sentence for Fritzl [Click]
Posted by Andaman Hero at 11:11 AM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ )
* ‌ဒေါ်စုလွှတ်ပေးရေး(၂၂) နိုင်ငံတောင်းဆို [Click]
* ရန်ကုန်တွင်အကြီးဆုံး၊ကုန်တိုက်ဖွင့်လှစ် [Click]
* မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် သောက်ရေ ပြတ်လပ် [Click]
* ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာ အရောင်းဝန်ထမ်းများအဖမ်းခံရပြန် [Click]
* မောင်းတော နယ်စပ်ကို သံဆူးကြိုးကာပြီ [Click]
* ဒေါ်စုလွှတ်ပေးရေး အယူခံထပ်တင် [Click]
* ဇာဂနာ မိခင်ကြီး အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေ [Click]
* ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူမရှိဘူးလို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ထုချေ [Click]
* ဘင်္ဂလားနယ်စပ်တွင် မြန်မာစစ်အင်အား တိုးချ [Click]
* မာဒါဂတ်စကာမှာ စစ်တပ်က အတိုက်အခံကို အာဏာလွှဲပေး [Click]
* နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးပြီးကမ္ဘာ့ပူနွေးမှုပြဿနာဖြေရှင်း [Click]
* နအဖစစ်ကြောင်းမှ ခရီးသည်များကို ဓါးစာခံလုပ်သည်ဟု ခရီးသည်များကဆို [Click]
* မြန်မာ‌ဘောလုံးကလပ်‌ အသင်း‌တွေအဖွဲ့ မည်‌ [Click]
* စင်ကာပူရဲ့ စီးပွားရေး အကြီးအကျယ်‌ ထိခိုက်‌နိုင်‌ဖွယ်‌ရှိ [Click]
* လူႛအခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာကို စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ပြန်လည်ချေပ [Click]
* သစ်ခွပန်းကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် အစွဲပြုနာမည်ပေးပွဲဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်ကြ [Click]
* ထိုင်းအိမ်ရှင်အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးထွက်ပြေးခဲ့ရ [Click]
* မူဆယ်နမ့်ခမ်းဒေသမှာပြည်သူ့ စစ် မဖွဲ့ မနေရဖွဲ့ ခိုင်း [Click]
* ပြည့်တန်ဆာများ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကူးစက်နှုန်း မြင့်မား [Click]
* နေပြည်တော်သိမ်း စီမံကိန်း ဟာသ [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:56 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၀၉ )
* ‌ရိုဟင်ဂျာပြဿနာအဖြေရှာဖို့အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာကိုတိုက်တွန် [Click]
* ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားခရီးနဲ့စဉ်းစားစရာများ [Click]
* ‌ကျောက်ဈေးကွက်ပျက်‌မှုဒဏ်‌ အလုပ်‌သမား‌တွေအလူးအလဲခံ‌ [Click]
* မာဒါဂတ်စကာ သမ္မတနန်းတော်ကို စစ်တပ် သိမ်းပိုက် [Click]
* မီးဘေးကာကွယ်ရေးသတင်းငွေမရှိ၍ တီဗွီမှမလွှင့်နိုင် [Click]
* ပဲဈေးကွက်အေးစက်ကုမ္ပဏီများဆက်ဖွဲ့ [Click]
* ရှမ်းတဲကြီးကျေးရွာအနီးရေနံထွက်ရှိခြင်းသတင်းမမှန်ကန် [Click]
* လူရွှင်တော်ပြက်လုံးအပေါ်အငြိမ့်ကခွင့်မပေးသည်ထိအငြိုးထား [Click]
* နိုင်ငံရေးသမား ၂၁ဝဝ ကိုလွှတ်ရန်ကုလအရာရှိတောင်းဆို [Click]
* KNU စစ်ခေါင်းဆောင်များ ထိုင်းဘက်ကမ်းပြန်ဝင်မရသေး [Click]
* ဂျပန်ကမြန်မာကိုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသင်တန်းပေး [Click]
* စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမှု ပုံမှန်ဟု မြင်းခြံဆရာမပြော [Click]
* ကျောက်မျက်ပြပွဲ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာတွင် ကျင်းပ [Click]
* စရဖ ညွှန်ချုပ်ထံမှ ဖြုတ်သိမ်းထားသည့် လက်နက်များ ပြန်မပေးနိုင်ဟု ၀ တပ်ပြော [Click]
* ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အမိမြေသို့ပြန်ပြေး အလုပ်ရှင်များစိုးရိမ် [Click]
* လူငယ်ရှေ့ နေဦးဖိုးဖြူကိုထောင်ဒါဏ်ချမှတ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:44 PM0comments
မလေးမေ by မလေးမေ ဘလော့ဂ်မှာကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Posted by Andaman Hero at 3:39 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( မတ်လ ၁၆ ရက် ၂၀၀၉ )
* အင်‌ဒို‌ရောက်‌ဒုက္ခသည်‌‌တွေကိုမြန်‌မာနိုင်ငံကပြန်‌လက်‌ခံမည် [Click]
* ကော့သောင်းထောင်ရောက် ၈၈ ခေၝင်းဆောင် က္ဘိုပုံးခဵိုထောင်ဝင်စာခက်ခဲ [Click]
* မြန်မာအတိုက်အခံလှုပ်ရှားသူအချို့ဖမ်းဆီးခံရ [Click]
* ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေကေဵာင်းသားမိဘမဵားကိုဧည့်စာရင်းခတောင်းခံ [Click]
* လျှပ်စစ်မရှိသည့်ဘုံလုံးအိုင်ရွာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးမြေမြုပ်ပြီးအအေးခံရ [Click]
* ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအပြီးမြ၀တီလောင်းကစားဝိုင်းတွေ ခေါင်းထောင် [Click]
* နာဂစ်ဒဏ်ခံရွာ ၁၅ ရွာရွှေ့ရမည် [Click]
* ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများက၊ကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံတန်မြန်မာရေကာတာစီမံကိန်းများရပ်ရန်တောင်းဆို [Click]
* ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားသုံးဦးထွက်ပြေး၊အခြားသူများအတွက် စိုးရိမ်ရ [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဘီလ်ရစ်ချဒ်ဆန် စကားဝိုင်းအပိုင်း(၃) [Click]
* စစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ တွေ့ဆုံ [Click]
* မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ပြည့်တန်ဆာ ပိုများလာ [Click]
* လေဖြတ်နေသူ နိုင်ငံရေးသမား အဖမ်းခံရ [Click]
* မြန်မာကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်ဆုပေးဖို့ ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကမ်းလှမ်း [Click]
ခိုးမှုနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ကျဘူးတဲ့၊သူခိုးတယောက်ကို၊အကြိမ်ကြိမ်ပြစ်ဒါဏ်ချဘူးတဲ့၊ တရားသူကြီးတယောက်က ဒီနေ့လည်းသူ့ တရားရုံးကနေအမိန့်ချရအုံးမှာဖြစ်တယ်။
တရားသူကြီး ။ ။ (တရားသူကြီးဟာသူခိုးရဲ့မျက်နှာကိုအသေအချာကြည့်ပြီးတော့၊
စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ ) မင်းကိုအမိန့် မချခင်၊ငါမင်းကိုတခု
သူခိုး ။ ။ (ရိုးကျိုးတဲ့အမူယာနဲ့ ) အမိန့် ရှိပါ။တရားသူကြီး။
တရားသူကြီး ။ ။ ငါမင်းကိုခိုးမှုနဲ့ နောက်တကြိမ်ပြစ်ဒါဏ်မချပါရစေနဲ့ တော့။
သူခိုး ။ ။ ဟုတ်… ဟုတ်ကဲ့..ခင်ဗျ။
တရားသူကြီး ။ ။(တရားသူကြီးဟာသူခိုးကိုကျွတ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ )မင်းနှယ်ကွာ။ခိုးစားလို့ 
ဆုံးမင်းရဲ့အင်္ကျီ၊ပုဆိုးကလည်းဖါထေးရတွေနဲ့ ပြည့်လို့ ။ခိုးစားတယ်ဆိုတာ၊
သူခိုး ။ ။ အီး … ဟီး … ဟီး … ။
တရားသူကြီး ။ ။ (တရားသူကြီးဟာဒီတခါတော့၊သူခိုးကျွတ်ပြီးလို့ အထင်နဲ့ )ဘယ်နဲ့ လဲ။ မင်း
သူခိုး ။ ။ သံဝေဂရလို့ မဟုတ်ပါဘူး။တရားသူကြီးပြောမှပဲကျွန်တော့်ရဲ့ဘ၀ဟာဒီလောက်
ကျန်ုပ်ဟာ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင်စစ်စစ်တစ်ဦးပါ၊၊ ကျုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ကျုပ် ယုံကြည်လေးစါး၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါတယ၊်၊ ထိုနည်းတူစွာပဲ အခြားလူတွေလဲ သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားတွေကို သူတို့ ယုံကြည်လေးစားကြမှာအမှန်ပါ၊၊ ကိုယ်မယုံကြည်တာနဲ့ ဘာသာတခုကို စော်ကား ဝေဖန် ရှုတ်ချပြီး၊ မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာက လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခနဲ့လဲ မကိုက်ညီ လူမဆန်တဲ့အပြု အမူဖြစ်တယ်၊၊ အိစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုယ်ကမယုံကြည်တာနဲ့၊ မဟုတ်မဟပ် အမျိုးမျိုးလံကြုပ် ရေးသားပြီး၊ အပုတ်ချတာတို့၊ ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်ရှုတ်ချနေတာတွေဟာ၊ ဗုဒ္ဓြွဘာသာ ဝင်ကောင်းတို့ လုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူးခင်ဗျား၊၊ ဘာသာကွဲတွေကတောင် ကိုယ့်ဘာသာ ကို အထင်အမြင်သေးလာမယ်၊၊
မကြိုက်ရင် မကိုးကွယ်နဲ့ပေါ့၊၊ သူများဘာသာကို ဝေဖန်တာတော့ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူး၊၊ ဗမာပြည်မှာလဲ အီစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမြောက်အများရှိတယ်၊၊ သူတို့တွေဟာ ဟို့ဗမာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကနေ လွပ်လပ်ရေးရတဲ့အထိ အခြားမြန်မာတိုင်း ရင်းသားတွေ နဲ့ ထပ်တူ တိုင်းကျိုး ပြည်ကျိုးထမ်းပိုးလာတာတွေကို လေ့လာသိရှိဘို့လိုတယ်၊၊ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်သင့်ဘူး၊၊
ဗိုလ်ခင်ညွန့်လက်ထက်ကလဲ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးစာအုပ်တွေထုတ်တယ်၊၊ ပြီးတော့ အပြစ်မရှိတဲ့ မူဆလင်တွေကိုသတ်ဖြတ် မီးရှိုးတာတွေလုပ်တယ်၊၊ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေဟာ၊ ဤမျှညစ်ညံ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဘို့မဆိုထားနဲ့၊ စဉ်းစားတောင်မစဉ်းစားသင့်ဘူး၊၊
သမိုင်းကိုသေသေချာချာလေ့လာကြည့်ပါ။ ဗုဒ္ဓြွဘာသာပေါ်ခါစက၊ အိန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓြွဘာသာကို နှိမ်နင်းဖျက်ဆီးခဲ့တာဟာ ရှေးဟောင်းဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေကပါ၊၊ ဟိန္ဒူဘာသာက ဗုဒ္ဓြွဘာသာ ထက်စောတယ်၊၊ ဟိန္ဒူဘာသာရှိလျက်နဲ့ ဗုဒ္ဓြွဘာသာပေါ်ရမလားဆိဲုပြီး ဟိန္ဒူတွေက လုပ်ခဲ့တာပါ၊၊ မူဆလင်တွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊၊ အိန္ဒိယမှာ အခုလဲမကြာခဏဆိုသလို မူဆလင် ဗလီတွေကိုမီးရှိုးဖျက်ဆီး၊ မူဆလင်တွေကို သတ်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်၊၊
ဒုတိယ ကမBာစစ်ကာလအတွင်း ၊ ဂျာမဏီမှာ ဂျူးလူမျိုး (၆) သန်းကျော်ကို သတ်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊ သိရဲ့လား၊၊ ဟီတလာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဂျာမန်တွေကပါ၊၊ ဂျပန်နိုင်ငံကို ၁၉၄၅ နှစ်က အနူမြူ ဗုံးခွဲတာဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊၊ ဗီယက်နမ်ကို ၁၉၅ဝ ခန့်ကစပြီး စစ်ပြုလို့၊ လူသန်းချီသေခဲ့တာဟာ အမေရိကန်က ပြုခဲ့တာပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊၊ အီရတ်ကိုဝင်တိုက်လို့ လူသန်းနဲ့ချီ သေတာဟာ အမေရိကန်က “ဘုရှ်” လုပ်တာပါ၊၊ မူစလင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်၊၊ အဖဂန်ကိုတိုက်နေတာလဲ အမေရိကန်ကပဲ၊၊
၁၉၆၂ ခုနှစ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို သတ်တာဟာ “နေဝင်း” အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် ဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေကပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊ ၁၉၆၈ ခုခန့်က ဗမာပြည်မှာ ဆန်ရှားလို့ တရုတ်တွေကို သတ်ခဲ့တာ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် ဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေက ဖန်တီးခဲ့တာပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊၊
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဦးသန့်အရေးအခင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်သားတွေကို သတ်တာ၊ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် “နေဝင်း”နဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းမှာ သောင်းချီတဲ့ ဗမာပြည်သူတွေကို သတ်ခဲ့တာဟာ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် ဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေကပါ၊၊ မူဆလင်တွေ မဟုတ်ဘူး၊၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့် လက်ထက်က၊ ဗမာပြည်မှာ၊ မူဆလင်တွေကို အကြိမ်ကြိမ် သတ်ဖြတ် မီးရှိုးတာဟာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရဲ့ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါ၊၊ တီပဲယင်းမှာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာ ဗုဒ္ဓြွဘာသာဝင် နအဖ ရဲ့မီးသတ်အဖွဲ့ နဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေပါ၊၊ မူဆလင်တွေမဟုတ်ဘူး၊၊
ပူပူနွေးနွေးဘဲရှိသေးတဲ့ ငါတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓြွဘာသာရဟန်းတော်တွေကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာ သတ်ဖြတ် ခဲ့၊ ထောင်ချနေတာတွေဟာ၊ ဘယ်သူတွေလဲ၊၊
အခုအခါ ပြည်သူတွေထမင်းရည်သောက်၊ ဘဝပျက်နေကြတဲ့အချိန်၊ တိုင်းရင်းသားစည်း လုံးညီညွတ်ရေးဟာလဲ အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်၊၊ ခုလိုအချိန်မှာ ပြည်တွင်းက အပြစ်မဲတဲ့ မူဆလင်တွေကို ပြသနာလုပ်လို့ တိုင်းပြည်အခြေအနေ တည်ငြိမ်မှု မရှိဆိုပြီးတော့၊ နအဖက အာဏာကြာကြာထိန်းချုပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို ပိုမိုနှိပ်စက်နိုင်အောင် ဖန်တီးတာဟာ မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်၊၊
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အဖိနှိပ်ခံနေရဆုံး မူဆလင်တွေကို နောက်ထပ်မီးလောင် ကွင်းထဲတွန့်ပို့တာ လူသားမဆန်ဘူးနော်၊၊ သူတို့တွေဟာ ဗမာပြည်အတွက် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ၊ ဗမာဘုရင် တွေရဲ့သမိုင်းကို သွားလေ့လာအုန်းနော်၊၊
Posted by Andaman Hero at 7:00 PM0comments
ယနေ့သတင်းများ (မတ်လ ၁၃ ရက် ၂၀၀၉)
ကြံ့ဖွံ့အမတ်လောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းတောင်ဥက္ကလာမှာမဲဆွယ်ဖို့ကတ္တရာလမ်းခင်း
အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာသည့် ဦးနေ၀င်းသမီးစစ်အစိုးရခွင့်ပြုမှ မောင်ဖြစ်သူနှင့် တွေ့ခွင့်ရ
လက်‌ဖက်‌မ်ဟာ သုံးတဲ့ဆိုး‌ဆေး‌တ်ေဝက ‌ရောဂာ‌ဖ်ရစ်‌‌စေ
ယနေ့သတင်းများ (မတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၀၉)
ဂဠုန်ဦးစောမိသားစုများက စာရေးဆရာကို တောင်းပန်ခိုင်း
တာချီလိတ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး အမြောက်အမြား ဖမ်းမိ[Click]
from : NCUB
KNU PRESS STATEMENT ON ITS PEACE EFFORT OFFICE O...